🥇 ▷ Apple Hire Anand Lal Shimp, aasaasaha AnandTech ✅
Apple Hire Anand Lal Shimp, aasaasaha AnandTech
Aasaasaha AnandTech wuxuu ku biirayaa safka Apple
Waqtiyadi ugu dambeeyay Apple Wuxuu sameeyay saxiixyo badan oo cusub. Shirkaddu waligeed ma joogsanayso raadinta karti cusub oo ay ku buuxiso boosaska kooxaha shaqadeeda iyo markan waxay shaqaaleeyeen Anand Lal Shimp, oo laga yaabo in magacani uusan wax badan ka oran, laakiin ay macquul tahay haddii aan kuu sheegno inuu yahay aasaasaha ‘AnandTech portal’ ee caanka ah.
AnandTech waa websaydh lagu falanqeeyo alaabada tikniyoolajiyadda leh taariikh ku dhow 18 sano. Waqtigaan oo dhan webku wuxuu horumar sameynayey wuxuuna noqday marin tixraac ah oo ku saabsan waxkasta oo ku lug leh qalabka. Hadda aasaaseheeda ayaa markabka ka tagaya booskiisuna waa Ryan Smith, qof kalsooni buuxda ku qaba Anand.
Anand’s fort weligiis wuxuu ahaa dib u eegista alaabada teknolojiyada. Daqiiqadihii ugu horreeyay ee boggiisa intarnetka, wuxuu dib u eegay nooc kasta oo wax soo saar ah, in kasta oo in yar in yar oo jacaylka uu u qabo Apple iyo wax soo saarkiisa ay sii kordhayeen.
Lama oga doorka uu AnandTech ka ciyaari doono kooxda Apple
Haatan dadka Cupertino waxay Albaabada u fureen Anand isla markaana maamulaha webka ayaa ku biiri doona kooxda Apple. Dabcan way adag tahay in la ogaado waxa uu ka qaban doono shirkadda. Waxaa laga yaabaa Apple inay ka faa’iideysanayso awoodeeda falanqaynta si loo garto loona xalliyo dhibaatooyinka la xiriira qalabka alaabada sida ay sheegeen iSpazio, in kasta oo dabcan aan la xaqiijin waxa dhabta ah ee booskoodu noqon doono.
Anand wuxuu dhagtaheysi wanaagsan ku siiyay dhagaystayaashiisa AnandTech fariin dheer. Wuxuu sidoo kale fursad u helay inuu yiraahdo ma noqon doonto macsalaameyn guud, laakiin waxaan rajeyneyaa inay dib u daabacdo dib u eegista alaabada iyo wax la mid ah mustaqbalka waxay hubineysaa “caqabado badan ayaa jira.” Ma dafiri karno taas waan xiiseyneynaa oo waxaan jeclaan laheyn inaan ogaano sida saxda ah ee doorka Anand uu ku dhex lahaan doono Apple dhexdeeda, laakiin ka fiirsashada sida shirkadda Cupertino ay badanaa u shaqeyso, ma aaminsani inaan ogaan doonno, ugu yaraan ma ahan mustaqbalka dhow.
Maxaad u maleyneysaa inay Apple sameyso saxiix noocan ah? Ma u malaynaysaa in Anand waxtar u yeelan doono kooxda Apple?